Juan José Millás, anokunda mubairo wePlaneta (2007) | Zvazvino Zvinyorwa
Juan José Millás: mabhuku
Nemakore anoda kusvika makumi mashanu ebasa, munyori wechiSpanish uye mutori wenhau Juan José Millás munyori akazvitsaurira. Parizvino, ine zvinopfuura makumi matatu neshanu zvinyorwa, zvinosanganisira zvinyorwa, nyaya, zvinyorwa uye mishumo. VaValencian vakamira mumunda wekunyora muma35s kuburikidza nebhuku rake rechina: Wet bepa (1983). Iyi rondedzero yemapurisa yakanyorwa mukukumbira kwemuparidzi wemabhuku evechidiki, uye kubva payakatanga kuve nemhinduro huru.
Yakanga iri mushure mekubudirira kwenhau ino kuti Millás akapinda muhunyanzvi, iro basa raanorovedza aine maitiro ake epakutanga. Akapihwa kakapetwa kagumi nemubairo wakakosha, zvese zviri zviviri zvekunyora uye zvekutapa. Yavo ma doctorate maviri honissausa, yakapihwa neMayunivhesiti eTurin neOviedo.
1.1 Zvidzidzo uye ruzivo rwebasa
1.3 Zvekuita zvemitambo
1.4 Novel naJuan José Millás
2 Synopsis yemamwe mabhuku aJuan José Millás
2.1 Wet bepa (1983)
2.2 Vakadzi vaviri muPrague (2002)
2.3 Nyika (2007)
2.4 Mukadzi anopenga (2014)
2.5 Hupenyu pane dzimwe nguva (2019)
Juan Jose Mills Garcia akaberekerwa muValencia (Spain) muna Ndira 31, 1946. Anobva kumhuri hombe, ndiye wechina pavanun'una vapfumbamwe. Vabereki vake vaive Vicente Millás Mossi - mugadziri uye nyanzvi yekumaindasitiri- naCándida García. Akapedza makore ake ekutanga mutaundi rekumusha kwake, kusvikira muna 1.952 akatama nemhuri yake ku Kubudirira, taundi rakakurumbira re Madrid.
Zvidzidzo uye ruzivo rwebasa
Akadzidza husiku, sezvo masikati aishanda semushandi wenguva pfupi mubhangi rekuchengetedza. Kwemakore matatu akadzidza Philosophy uye Tsamba - Muhunyanzvi hwePure Philosophy- kuComplutense University yeMadrid, iyo akazoenda papera nguva. Pakutanga makore gumi e makumi manomwe ' akabatana neIberia press office.
Mukutanga kwake aifarira nhetembo, kunyange hazvo akazopedzisira azvipira kune runako rwekurondedzera. Muna 1975, akaburitsa bhuku iri. Cerberus ndiyo mimvuri; iyo yaakagashira iyo Sésamo mubairo gore rimwe chetero uye akawana kuzikanwa kukuru kubva kuvatsoropodzi vezvinyorwa. Mumakore matanhatu akatevera akapa mabasa maviri: Chiono chevakanyura (1977) uye Bindu risina chinhu (1981).
Muna 1983, akaburitsa bhuku rake rinozivikanwa kwazvo: Wet bepa, nganonyorwa yakabata zviuru zvevaverengi. Mushure meizvozvo kubudirira, mumakumi matatu emakore apfuura yakasimbisa basa rake rekunyora ne 16 nhoroondo izvo zvakamuita akakodzera mibairo yakakosha. Pakati pezvinyorwa, zvinotevera zvinomira pachena: Vakadzi vaviri muPrague (2002), yaakakunda nayo mubairo wePrimavera; Y Nyika (2007), anokunda iyo Planeta (2007) uye National Narrative (2008) mibairo.
Pakutanga iwo makumi mapfumbamwe ', akatanga basa rake rekutapa mupepanhau Nyika uye mamwe maSpanish media. Yakave yakaratidzirwa nekunyora makoramu anonzi "zvinyorwa", maanoshandura chiitiko chakajairika kuita chimwe chinhu chinonakidza. Mundima iyi akakudzwa kakawanda, pakati pemubairo wake wakamira pachena: Mariano de Cavia Journalism (1999) uye Don Quixote weJenali (2009).
Novel naJuan José Millás
Cerberus ndiyo mimvuri (1975)
Chiono chevakanyura (1977)
Bindu risina chinhu (1981)
Wet bepa (1983)
Tsamba yakafa (1984)
Iko kusagadzikana kwezita rako (1987)
Kusurukirwa kwaive uku (1990)
Benzi, rakafa, bastard uye risingaonekwe (1995)
Alphabetical order (1998)
Usatarise pasi pemubhedha (1999)
Vakadzi vaviri muPrague (2002)
Laura naJulio (2006)
Zvandinoziva nezvevarume vadiki (2010)
Mukadzi anopenga (2014)
Kubva pamumvuri (2016)
Nyaya yangu yechokwadi (2017)
Ngakurege kuva nemunhu anorara (2018)
Hupenyu pane dzimwe nguva (2019)
Synopsis yemamwe mabhuku aJuan José Millás
Mutori wenhau Manolo Urbina anotanga kuferefeta nezve "kuzviuraya" kwe shamwari yake yekare Louis marykubvira fungidzira kuti akapondwa. Pese parwendo urwu, iye panguva imwe chete anonyora zvakaitika munhoroondo, sekuchengetedza kana paizoitika chimwe chinhu kwaari. Vakadzi vaviri vakakosha muhupenyu hwemushakabvu - Teresa naCarolina- vachabatsira Manolo panguva yekuferefetwa.
Mukutsvaga zvinyorwa, Teresa anowana bhegi rine mari uye zvinyorwa zvinokanganisa, izvo zvinosanganisira wemishonga. Zvese zvinotanga kupunzika kana Inspector Cárdenas atora itsvo dzeichi chiitiko. Uyu mukuru achaona chimwe chezvikamu zvakakosha kugadzirisa nyaya iyi nekubwaira kweziso, zvine mhedzisiro inoshamisa uye inoshamisa.
Wet bepa (Bhuku re ...
En la tsvaga yemumwe munhu anonyora nhoroondo yake, Luz Acaso tora pepanhau uye anorovera mu zita re munyori wechidiki ane mukurumbira. Akatofunga - azere enigmas - anoenda kuhofisi yemunyori kunyora kuti akumbire zvakadai; anoigamuchira uye anoigamuchira. Vlvaro Abril (munyori), pachikamu chake, anozviwana ari muhondo yemukati: kunyangwe hazvo bhuku rake rekutanga rakamubata kuti abudirire, kufungidzira kusingaperi kwekuve mwanakomana wekurerwa hakuna kumurega achifara.
Pabvunzurudzo deRuzi neAvaro, anorondedzera chokwadi chehupenyu hwake zvinoita sekudaro zvakatorwa kubva zviitiko kubva mufirimu rekunyepedzera. Nepo kuungana pakati pevaviri kuchipfuura, chisungo chinokura nekuda kwezviitiko zvinogara zvichiitika. Uye zvakare, vatambi vakati wandei vanobatana mukurangana, pakati pavo, María José, shamwari yeLuz uyo ane chikumbiro chaÁlvaro.
Nekutendeuka kwemapeji boka rezvakavanzika, chokwadi, hunyengeri uye zvakawanda zvekufungidzira zvinotanga kubuda ... Zvinhu izvi zvinokomberedza munhu wese panguva yechirongwa, icho chinoitika mukukura kunokwezva kusvikira kumagumo kwaburitswa izvo zvisingatarisirwe nemunhu.
Vakadzi vaviri muPrague ...
Mumwe mukomana -Juan José- anotaurira hudiki hwake kubva mumaonero ake; kuzvarwa kwake, makore ekutanga muValencia uye kuendeswa kubva kuguta rekumusha kuenda kuguta reMadrid. Anotsanangura zvakaitika kwaari munzvimbo yepashure pehondo, yakazara nemufaro nekusuwa, mune inotonhora mamiriro ekunze, nehukama hutsva uye zvisingadiwi rudo. Ichokwadi chaaifanira kujaira, chakanaka kana chakaipa.
Sezvaanokura, anorondedzera marashiro aanoita vanhu vakakosha kwaari Uye dzese idzo pfumbu nguva dzakaoma kutakura Kusavapo kwevanodiwa kunoenderana nekuchinjika yeiye atova kuyaruka, uyo anoedza kurarama nenzira yakanakisa. Iyo nyaya inoratidzirwa nenguva dzinoverengeka dzekuvapo kwayo - kwekuti mwana zvishoma nezvishoma anova murume sei - pakati pechokwadi nekufungidzira.
Julia mutengesi wehove uyo anosarudza kudzidza zvakawanda nezve mitauro, izvi nekuti , que anoshushikana naboss wake Roberto, anova philologist. Anozvidzidzisa nenzira yekuzvidzidzisa, uye mukuita uku vatambi vanouya mundangariro nevaya vaanotaurirana navo mukutsvaga mhinduro. Kuwedzera pakushanda kumubati wehove, Julia anotarisira Emerita, uyo anorwara zvakaipisisa akatsunga kufa.
Rimwe zuva apo mukadzi wechidiki uyu aipinda kuEmerita, inoshanyirwa naMillás, mutori wenhau anoda kushuma nezve euthanasia. Paakasvika pakuziva Julia zvakadzama, anobva angofunga kunyora nyaya yake. Causally, murume uyu aipfuura nepakati pekugadzira block. Nenzira yakaoma, zvese zvinoshanduka ...: Emerita anoburitsa pachena enigma, uye mutori wenhau anoshamisika.
Mukadzi anopenga (Novel)
Juanjo Mills munyori uyo anorondedzera 194 mavhiki ehupenyu hwake, zvichibva pane zvaakanyora mudhayari. Ikoko anofumura hunhu hwake, chimwe chinhu chine njere, anofara, anotsvinya uye anorwadza; munzvimbo yakatemwa pakati pehutano uye paranoia. Saizvozvowo, anorondedzera zvimwe zvakaitika, sekushanya kuna psychoanalyst, zvaaifarira, kurapwa uye nehupenyu hwega hwezuva nezuva hwemurume anoona.
Chitsauko chidiki chimwe nechimwe chinorondedzera nguva dzakasiyana, nemamiriro asinganzwisisike uye anonakidza. Se vanopa zviitiko zvakapusa: senge yako yekunyora traffic jam, matambudziko emumba, kana yako mota kupunzika. Iyo ingano yekunyepedzera iyo inogona kana inogona kunge isingave neicho chaicho, nezve munhu chaiye, asi yakati rebei uye ine zvakashamisa zviono.
Hupenyu dzimwe nguva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Juan José Millás: mabhuku
Mune shangu dzaValeria